कोरोनाको नयाँ ‘भेरिएन्ट्स’ आशंका : धरान सहित प्रदेश १ मा ७ जना संक्रमित
विराटनगर । पछिल्लो पटक प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरसहित मोरङका शहरहरुमा भेटिएका संक्रमितहरुमा कोरोनाको नयाँ ‘भेरिएन्ट्स’ हुन सक्ने देखिएको छ ।
ट्राभल हिस्ट्री हेर्दा भारत पुगेको देखिएकोले पछिल्लो पाँच दिन यताका संक्रमितमा नयाँ भाईरसको संक्रमण भएको हुनसक्ने स्वास्थ्य विज्ञको अनुमान छ । कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट्स पहिलेको तुलनामा निकै संक्रामक मानिन्छ ।
विराटनगरमा मंगलबार थपिएका एक सहित पाँच दिनयता ७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबार झापा, मोरङ र सुनसरीमा पाँच जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेश बाहिरका एक जना, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका एक र ठेगाना नखुलेका एक र झापाका अर्का एक जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मंगलबार दुई सय ४२ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो ।
कोसी अस्पतालका मेसु डा. चुमनलाल दासले नयाँ भेरिएन्ट्स निक्कै संक्रामक भएको अध्ययनले नै देखिएको बताउँदै भन्छन्, “संक्रमण अति चाँडै फैलन सक्ने खतरा भएकोले सरकारले तोकेका मापदण्डलाई मान्न सबै नागरिक तयार हुनुपर्छ ।” दासले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलन नदिन नागरिकको कर्तव्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताएका छन । पछिल्लो पटक मानिसहरुले मास्क नलगाउने, भिंड गर्ने, जमघटमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड नमान्ने देखिएकोले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट्स भए यसको फैलावट अति तीव्र हुन सक्ने उनले बताए ।
नयाँ संक्रमण देखिएकाहरुको ट्राभल हिस्ट्री हेर्दा भारतसँगको सम्बन्ध देखिएकोले नयाँ कोरोना भाईरसको भेरिएन्ट्स हुनसक्ने आशंका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख डा. सुरेशकुमार मेहताको छ । उनले भने, “नयाँ भाईरस हुन सक्छ तर थप परीक्षणपछि मात्र यसबारे यकिन गरेर भन्न सकिन्छ ।” मोरङमा पाँच दिनयता देखिएका संक्रमितमध्ये विराटनगरका ७ जना, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका ३ र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका एक जना छन ।
विराटनगर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रमेश कार्की संक्रमितहरुमा नयाँ भाईरस भएको हुनसक्ने देखिएकोले अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बढावा दिने बताए । विराटनगरमा स्वाब संकलन भ्यानसमेत परिचालन गरी कोरोना परीक्षण हुँदै आएको थियो । तर, दुई महिनायता स्वाब संकलन बन्द गरिएको छ । प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या तीस हजार नाघिसकेको छ ।
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री हिक्मत कार्कीले भारतीय सीमामा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै भने, “ंसंक्रमण फेरि फैलन सक्छ तर आतंकित भएर भन्दा संयमित र सावधानी अपनाएर यसको मुकाबिला गर्न तयार रहनुपर्छ ।” कार्कीले परीक्षण र उपचारमा प्रदेश सरकारले कुनै कमजोरी नगर्ने बताए ।